I-West vs Midwest Round II | Martech Zone
NgoLwesithathu, Septemba 15, 2010 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 UAdam Omncinci
Kwiveki ephelileyo, bendikwiphaneli eThe The Combine - 2010 ebizwa Yiya eNtshona: Ababesakuba ngamaMidwesterners abaye bafudukela eSilicon Valley babelana ngamabali abo. Ndingomnye wabantu abane abaxoxa ngamabali ethu kwaye bacima umlilo kwi-Twitter kwaye ndaya kwiCat 4 xa uDoug Karr ephendula indlela awaphendula ngayo xa ephinda Hlanganisa u-2010 Apha.
Zonke ezi mvakalelo zazigwetyelwe ngokupheleleyo zinikezwe ubume obungenabunzulu befomathi, esele ivuthiwe ngenxa yokulunywa sisandi, kodwa ayonelanga ekukhanyeni ngokwenyani kwento efanele ngaphezulu kwemizuzu eli-10 yokuncokola nje umntu ngamnye. UDoug Karr ubenobabalo olukhulu ngokundinika ithuba lokuntywila kule ngxoxo ukuze ndinike umbono wam-hayi malunga nento eyehlileyo kwi-Combine- kodwa ukuyibuyisela kwakhona kwingxoxo-mpikiswano phakathi kwe-West vs Midwest (kunye nam kwindima ye Drago) kulowo ubonelela ngobunzulu malunga nokushishina apha eSan Francisco naseMidwest (kwimeko yam Bloomington, IN).
Ndicinga ukuba kukho izifundo, ezisekwe kugxeko olusemthethweni, olunokuthi lubonelele ngamathuba koku kuthi sonke nokuba sikweliphi icala. Emva kwayo yonke loo nto, ayisiyiyo enye yeentsika eziphambili zeshishini?
Amava ekwabelwana ngawo abumba indawo esihlala kuyo kunye nenkcubeko
Uluntu lwangaphandle eNtshona naseMidwest zombini zibaluleke ngokulinganayo kuzo zombini iindawo, kodwa kukho iiapile kwiiorenji xa kuthelekiswa namandla ezinto abazenzayo. Ibali lam lihambelana nabaninzi apha: ukuphuma eNtshona sisikweko esisebenzayo esinembali etyebileyo nenamandla kuphuhliso lwelizwe lethu. Ngokungafaniyo noLee noClark, akukho mntu namhlanje uhamba ngesikhephe enyusa umlambo, esilwa neebhere ze-grizzly kunye nokuthetha-thethana ngemfazwe Ma Indiya Abemi baseMelika, kodwa njengabo, sonke sabelana ngemeko efanayo yokuhlangana-nabantu, imihlaba kunye nokuzimela kwethu kunye nokusikelwa umda njengoko sibeka emngciphekweni sishiya ubutofotofo basekhaya safudukela eNtshona. Ababaninzi kuthi abavela apha, kodwa sakha uluntu lwethu kula mava aqhelekileyo ngaphaya kwalawo amasiko anje ngolwimi, udidi lwezentlalo noqoqosho, umbala kunye nokuzonda uKhan West.
Kwi-Midwest, uluntu yenye yezona zinto zomeleleyo kwaye zinomona kuyo nayiphi na inkcubeko emhlabeni. Abantu abakwi-Midwest baxabisa ukubanomqolo omnye nomnye, ukubuk 'iindwendwe (ngaphandle kokuba usemidlalo yebhola ekhatywayo yase-Ohio St - Mich), kwaye uhlala usenza umsebenzi wenziwe ngentshisakalo encinci kangangoko kunokwenzeka (ukuba iYunivesithi yaseIndiana ibeka amagama emqolo yeejezi zabo, ngekhe ndimangaliswe ukuba iBloomington ijika yaba yimfumba yelitye lekalika). Olu luvo loluntu lunamandla kakhulu, iya kuba sisenzo sobudenge ukushiya konke ngasemva uye endaweni apho ungabhatala khona i-1,700-ngenyanga ukuze uhlale kwibhokisi yezihlangu ngaphezulu komgca wempazamo osebenzayo.
Ke, zozibini iindawo zoluntu zineebhondi ezomeleleyo kakhulu, kodwa amaxabiso kunye namava enza ezo zibophelelo avelise izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga kushishino. Kwixesha elifutshane, i-Indiana okwangoku isesichengeni.
Umngcipheko kunye noMvuzo
Kwiindawo eziphantsi kakhulu Igama lam ndinguNobuntu, umlinganiswa ophambili "Akukho mntu" (edlalwa nguTerrance Hill) uthatha iimbumbulu ezimbalwa ngokusebenzisa umnqwazi wakhe weenkomo ovela kwi-Legendary gunslinger uJack Beauregard (odlalwa nguHenry Fonda), ukubonisa ubungqina bakhe kuye. Incoko bayayitshintsha ngokuqaqambileyo:
UJack: Ndixelele, yintoni umdlalo wakho?
Akukho mntu: Xa ndandisengumntwana, bendihlala ndizenza ngathi ndinguJack Beauregard.
UJack: … Kwaye ngoku nikhulile?
Akukho mntu: Ndilumke ngakumbi. Kodwa ngamanye amaxesha ukusebenzisa umngcipheko omncinci, kunokuzisa imivuzo, uyazi.
UJack: Ukuba umngcipheko mncinci, umvuzo mncinci.
Umahluko omkhulu endiwukhomba kuwo kwiinkcubeko phakathi kweNtshona kunye neMidwest kulele ngqo kule axiom. Kule minyaka mi-2 idlulileyo yokuzibandakanya kwiwebhu kunye noluntu lwetekhnoloji e-Indy naseBloomington, ndingatsho ngokuqinisekileyo, lo ngowona mbandela ubalulekileyo waseIndiana wokuba yiBoulder elandelayo okanye iSilicon Valley elandelayo. Oku kuyenza hayi kuthetha ukuba Akukho namnye uthatha umngcipheko, okanye akukho zinkqubela phambili zinokwenzeka eIndiana. Kodwa, oko kuthetha ntoni, kukuba elinye icandelo eliphambili lokwakha uluntu olunempumelelo aluzange luthenge kumngcipheko omkhulu okwangoku.
Isikhundla esibalulekileyo kulo naliphi na ishishini lobuchwephesha ngumseki wezobugcisa okanye umphuhlisi okhokelayo (duh). Imfuno yezi ntlobo zabantu ingaphezulu kokubonelelwa kwazo, kwaye oku kuyinyani eSan Francisco. Umahluko ophambili e-Indiana, kukuba inani elingaxutywanga labantu abanezakhono zobuchwephesha zokwakha imveliso yewebhu baphendule kolu nikezelo kwaye bafuna ukungalingani ngokuseta "iivenkile zeevenkile" ezikhuthaza uphuhliso lobuchwephesha. Oku kufuna ukuba oosomashishini abangabenzi bobuchwephesha benze yonke imali abayizuzileyo abayinyusileyo kunye / okanye ukulingana ukuhlawula umntu ongenalusu kumdlalo. Ndithethile nabaphuhlisi abaninzi abavela e-Indy naseBloomington ababesenza imivuzo emangalisayo abacinga ukuba ngoosomashishini kuba basombulula iingxaki zokuqala. Kodwa ayinyani. Awunguye usomashishini de uyeke umqamelo wakho, phosa umnqwazi wakho kubo bonke abanye abantu kwaye uzincame de udale into eyenza ixabiso kunye nokwenza imali. Ukuba ufaka i-W-2 minyaka le, awunguye usomashishini.
Douglas Karr kunye nabanye abaninzi benze umsebenzi omangalisayo ekumiseni i-Indy njengendawo yokuThengisa iTech. Kuyamangalisa oko. Nangona kunjalo, abanye abasunguli abajonge ukwakha i-Facebook / Google / njl.njl, bafuna italente enzulu yobunjineli. Ilapha, kodwa ayabiwa ngokufanelekileyo kwaye inkuthazo ayihambelani. Ndiyazi oosomashishini abaninzi abangenabugcisa e-Indiana abafuna ngamandla italente ye-dev kwaye abanakuyifumana ngaphandle kokuba bahlawule imali okanye bayeke imali engenakuhlala ententeni xa sele ikhutshiwe. Ke, i-Indiana isaphulukana noosomashishini abanetalente kakhulu eSan Francisco nakwiNtlambo ngenxa yokuba esi sidudla asikho ngamanani angahambelaniyo apha. Anditsho ukuba “ngekhe uphumelele ngaphandle kokuba uye eNtshona.” Into endiyithethayo kukuba bekunzima kakhulu kubasunguli abangengobugcisa ukufumana abaququzeleli bezobuchwephesha abafuna ukukhuphisana nabaqalayo kunye neenkampani zaseNtshona ezingenangxaki inye.
Iindaba ezimnandi zaseIndiana, nangona kunjalo. Izinto ziqala ukuhamba, kancinci, kwaye andicingi ukuba le izakuba yingxaki ekuhambeni kwexesha. Ixesha elingakanani? Andazi, kodwa ukuba bendingusomashishini eIndiana ongafuniyo ukushenxa eNtshona, ngendilibetha eli hashe lide lincitshiswe libe yimfumba yemolekyuli.
tags: badibaniseindianamidwestbucala ngasekunene
Inye kuphela uMboneleli weNkonzo ye-imeyile
Sep 15, 2010 ngo-5: 14 PM
@dougheinz uyindoda elungileyo, Doug. Ndiyayixabisa kakhulu iposti enethemba kunye nembono emnandi oyizisileyo kule ngxoxo. Ndinobuganga bokuthi, ubunethemba ngakumbi kunabanye bamazwi amabi asembindini wentshona bazokundingxolisa kwiposti yam. Enkosi ngokuthatha ixesha!
Sep 15, 2010 ngo-7: 13 PM
"I-West vs Midwest Round II" - iposti enkulu ngu @dougheinz kwibhlog ka @ douglaskarr.
Sep 16, 2010 ngo-2: 06 PM
Ndabuyela e-Indianapolis emva kweminyaka emi-3/1 kwisiXeko saseNew York ngokukodwa ukujoyina iRaidious. Mnye umqondiso wethemba apho.
Ukuqala kwam ukuphuma apho, bendinechap egxalabeni lam malunga nokuba silunge kangakanani apha njengakwezinye iindawo. Ndikhawuleze ndafunda ukuba yinyani leyo, kodwa ukuthetha ngayo kukwenza ube nesandi sephondo.
Umphathi wam wayengakholelwa ukuba ndivela eMidwest ngenxa yokuba “ndihamba ngokukhawuleza, ndithetha ngokukhawuleza,” ndithetha ngezandla, kwaye “ndilisiko kakhulu.” Enye ingxelo yam emgceni wamachaphaza ayinakukwazi nokuzoba ubume belizwe laseIndiana. Ezi zimbini ze-NYC lifers.
Ngelixa italente ihamba ijikeleze ngokukhululekileyo, inkcubeko ithanda ukuvela kolunye unxweme. Yinyani leyo. Kwaye ixesha elininzi, italente ilandela loo mthombo wenkcubeko kwenye yezi ndawo zimbini.
Ukucaphuka kunye nokuzithethelela ayisiyondlela yokuhamba. Umsebenzi omhle, uDoug. Ndiyithandile ithoni yakho.
Ukuba akukho enye into, yenza njengoko besenza eNew York. Nanini na xa umntu ekuthandabuza, baxelele ukuba bazenzele ngokwabo.
Yenza nje wena.
Sep 16, 2010 ngo-3: 16 PM
Enkosi ndoda. Elakho libali eliqhelekileyo elimangalisayo malunga nento eyenzekayo xa abantu abavela kwiindawo ezahlukeneyo kunye nemvelaphi behlangana kunye kwaye behamba ngaphambili. Ubomi bunzima kakhulu ukuhlala njenge-ideologue, akunjalo?